To Tweet kana Kwete kuTweet | Martech Zone
Mutungamiri wekutanga wekusarudza kana Twitter yakakodzera nzira yako yedhijitari
Ivo havawani 'vashandisi vavo! Zvikamu zviri pasi! Yakazara! Zviri kufa!
Vatengesi - uye vashandisi - vave nezvakawanda zvichemo nezve Twitter nguva pfupi yadarika. Nekudaro, nevanhu vanopfuura mamirioni makumi matatu nemakumi matatu vanoshandisa vanoshanda pasirese, pasocial media platform inoita kunge iri kuita mushe. Kushandisa kune kukurumidza Kwatatu akateedzana makota, uye pasina akajeka mukwikwidzi ari kuona, Twitter ichave iripo kuitira ramangwana rinotaridzika. Asi, zvakadaro hazvina kukodzera kune yega mhando. Chiteshi chega chega chine kusimba uye kushaya simba, saka kana uchifunga nezveTwitter yechirongwa chako chedhijitari gara uchifunga izvo chiteshi chinonyanya kukunda: kutaurirana kwakananga, kukurumidza, uye vanokurudzira.
Maitiro ekushandisa mukana weiyo simba re Twitter
Kutaurirana kwakananga - Kubata Twitter seyakareruka nhepfenyuro chiteshi kuri kusarudza kufuratira simba rayo rakasarudzika: Kutaurirana zvakananga nevateereri vako sevanhu vamwe nevamwe. Tsvaga mikana yekusvika uye kutanga kutaurirana zvakananga nevatengi. Kana kukwira kwe Alexa, Siri, uye commerce yekutengesa inotiratidza chero chinhu, ndezvekuti vanhu vari kujaira kutaura nemabhurandi zvakasikwa. Saka, svika kwavari nenzira yechisikigo panzira yakavakirwa hurukuro.
Pakarepo - Midzi yeTwitter yakanyatsosimwa muutapi venhau. Co-muvambi Jack Dorsey kunyangwe vatapi venhau pamwe nekumuka kwepuratifomu kuve nemukurumbira. Tora mukana weizvi uye shandisa Twitter yezvinhu zvine chekuita nezvechiratidzo chako: tarisa pazviziviso, zviitiko, uye nyaya dzinoenderera.
Vanokurudzira - Indasitiri yega yega ine mutungamiri wekufunga, uye Twitter inoita kuti zvive nyore kusvika kwavari. Vatungamiriri vanofunga vari kuramba vachiwedzera kukosha kune vatengi: muchokwadi, 49% yevashandisi ve twitter vimba nemazano kubva kune vanokurudzira. Saka, svika kwavari. Vabvunze mibvunzo yakanangana uye uvake hukama munzira dzausingazombogona kunze kwenzanga dzevanhu.
Saka, Twitter yakakosha here? Iyo ine yakasarudzika kugona kwekutaurirana kwakananga, pfungwa yekukasira, uye kugona kukuru kwekukurudzira kusvika. Nyatso tarisa pazvinangwa zvako zvemuchina: kana iwe ukawana nzira yekushandisa simba re Twitter inogona kuve chikamu chine simba chezita rako redhijitari.
Ndeapi Twitter Metrics Iwe Aunofanirwa Kuteerera Kune?
Zvakanaka, wafunga kushandisa Twitter sechikamu chechirongwa chako chedhijitari. Zvino chii? Zvakanaka, iwe unofanirwa kuona maitiro ekuteedzera mashandiro. Twitter inopa mabhenakeri kuwana kune mamwe akasimba akasimba analytics pane yayo saiti, asi zviri nyore kuti ubatiswe pasi nenhamba dzese. Kuti uone kuti ndeapi maKPI anotarisa pane zvakakosha kuti uzviparadzanise nechinangwa chako chiteshi.
Chii Chaunoda Kushandisa Twitter For?
Kutungamira vatengi? Teedzera izvi metric:
Avhareji Pindura Nguva - Izvi zvinofanirwa kunge zvichienderana neindasitiri zviyero, asi kudarika izvo zviyero inzira yemoto yekufadza vatengi vako. JetBlue akafunga izvi. Iyo mhando inogara iri pakati pe ndege dzinomhanya-mhanya uye ndizvo inowanzozivikanwa nekuda kwekuyedza kwayo neindasitiri vateveri vayo.
Pindura Rate - Haasi ese mabvunzo anozokodzera kupindurwa, asi zvakakosha kubatsira avo vaunogona. Apa ndipo apo chirongwa chekukwira chinogona kuuya chinobatsira.
Tsitsi - Izvi zvinobatsira kuratidza kana mibvunzo yakakomba iri kugadziriswa / Maturusi mazhinji anokupa iwe kugona kuteedzera zvaunopindura zvakanyanya. Kana iwe ukangopindura kune zvakanaka zvataurwa, inogona kunge iri nguva yekugadzirisa.
Kufurira Campaign? Tevedzera izvi:
Nhamba yeTweets vs Nhamba yeVateveri - Sarudzira vanokurudzira pane izvi zviviri maitiro uye natsa zviwanikwa zvako nenzira kwayo: uyo anowanzo tweets kuvateveri vashoma ane imwe mhando yekufurira pane uya asingawanzo tweets kuvateveri vazhinji.
Mushandirapamwe wekusvitsa vateereri vatsva? Teedzera izvi metric:
Hashtag kushandiswa uye kutaura - Kuongorora kangani hashtag inoshandiswa, pamwe nereki uye / kana mushandirapamwe unotaurwa, inzira inoshanda yekuyera kusvika kwako kwemushandirapamwe.
Favorites - Vanogona kusaita zvakawanda pakutengesa munharaunda, asi inzira yakanaka yekuyera zvinofarirwa nevateereri vako. Funga nezvazvo se "basa rakanaka". Vakafarira izvo zvemukati, saka varatidze zvimwe zvacho.
Dzokorora - Nekudzokorora, ivo vakangoti, "Ini ndinofarira izvi uye ndinofunga vamwe vachadarowo". Iyi ndiyo chaizvo nzira iyo Twitter inogona kubatsira kuwedzera kwako kusvika kune yakatowanda vateereri saka chenjera kuteedzera retweets uye uone kuti ndeupi mhando yezvinhu izvo vateereri vako zvavanoda kugovana.
Replies - Izvi zvakare zvakanaka kumaka kune yako vatengi sevhisi, izvo zvinobatsira kuchengetedza iyo yakananga kutaurirana nevako vateveri.
Nguva yezuva / zuva revhiki - Izvi zvinogona kuve nyore munhu kufuratira. Vateereri vakasiyana vane tsika dzakasiyana dzemidhiya, uye kuteedzera nguva dzinobudirira uye mazuva ekubata kwakakosha kana uchigadzirisa zvakanaka zvako zvepa Twitter.
Kutyaira vatengi kune yako saiti? Teedzera izvi metric:
URL inodzvanya uye traffic - Twitter inogona kuve nzira inoshanda yekutyaira traffic, ingova nechokwadi kuti waronga nzira yekutevera URL kudzvanya uchishandisa Google Analytics kana chishandiso chakafanana. Uye tarisa peji rako rekumhara bounce mitengo kuona kuti traffic irikuita kune ako matanho.
Zvino, aya haazi iwo ega mametric aungawana achibatsira: zvinonyatsoenderana nezvinangwa zvawatsanangura. Asi kana iwe wafunga kutamba kumatwitter simba rekunanga kwakananga, kukurumidza, uye vanokurudzira, aya metric inzvimbo huru yekutanga.
Tags: avhareji yekupindura nguvanhamba yevateverinhamba yetweetsretweetTweettweet ctrTwittertwitter analyticstwitter tinya-kuburikidza chiyerotwitter dzinodikanwatwitter vateveritwitter hashtagstwitter simbaTwitter Kushambadziratwitter inotauratwitter metricstwitter inopinduratwitter mhinduro mwerotwitter manzwirotwitter nguva yezuvatwitter nguva yevhiki